ချမ်းလင်းနေ Chanlinnay: Myanmar E-Books
Thank you very much for sharing the books.
မောင်ကြယ်ငါး January 29, 2012 at 7:53 AM
Taung Por Thu August 16, 2012 at 3:43 AM
a really good site. Thanks
ကျေးဇူး အရမ်းတင်ပါတယ် ဆရာ။
အရင်က အတ္ထုပတ္တိ စာအုပ်တွေ ရှာမတွေ့တော့ပါ၊ ကျေးဇူးပြုပီး link တင်ပေးပါ၊ အရင် dowload လုပ်ထားတာတွေ harddisk crush ကြောင့် မရှိတော့ပါ။ ဦးသန့် တို ဦးနုတို့ ရဲ့ အတ္ထုပတ္တိတွေ....
Ko Mg Than(ManUniversity) November 4, 2012 at 5:25 AM
Ye Lin Hein January 4, 2013 at 3:48 AM
လူနေ မရှိဘူးလား ဆရာ အရမ်းဖတ်ချင်လို့ပါ
Ye Lin Hein January 4, 2013 at 3:51 AM
Anonymous July 8, 2013 at 3:55 AM
Anonymous August 22, 2013 at 12:14 AM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာ ဆရာကြီးရွှေဥဒေါင်းရဲ့စာအုပ်တွေလဲဖတ်ချင်ပါတယ်
chan win January 5, 2014 at 1:38 PM
chan win January 5, 2014 at 1:40 PM
chan win January 5, 2014 at 1:41 PM
Anonymous March 24, 2014 at 3:11 AM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Epigraphia Birmanica အတွဲတွေ၊ ကျောက်စာ မင်စာတွေ၊ မြန်မာ့ရာဇဝင်သမိုင်းကျမ်းတွေ ရှိရင်လည်း မျှဝေပေးပါဦး။
kyaw htet June 1, 2014 at 10:55 PM